I-ICCR Scholarship yaBafundi baseBangladeshi 2021/2022 Uhlaziyo lwePortal: Iindaba zeSikolo ngoku
I-ICCR Scholarship yaBafundi baseBangladesh: Nantsi into enomdla kubafundi beBangladesh. Kukho isifundi sakho. Oku kubonelelwa liBhunga laseIndiya lobuDlelwane beNkcubeko (ICCR).
Funda phantsi ngononophelo ukuze ufumane iinkcukacha ezipheleleyo.
Abafundi baseBangladesh bangafaka isicelo se I-ICCR Scholarship 2021. La manqaku akunika ulwazi oluyimfuneko ekufuneka uyazi. Kwakhona, iphendula ezinye ze-FAQs malunga ne-ICCR wokuya. Kule nqaku uza kufumana ulwazi malunga:
Ibhunga laseIndiya lobudlelwane bezenkcubeko (ICCR).
Ukusekwa kwamaziko enkcubeko e-ICCR.
Eminye yemisebenzi yebhunga laseIndiya kubudlelwane bezenkcubeko (ICCR).
Izifundo ze-ICCR 2021.
Izidingo zefom yesicelo semfundo ye-ICCR 2021.
Ulungelelwaniso lwezifundo ze-ICCR 2021-22 Bangladesh.
Ungasifaka njani isicelo se-ICCR 2021 yokufunda.
Amaxwebhu axhasayo e-ICCR yokufunda.
Umhla wokugqibela wesicelo se-ICCR yokufunda i-2021.
Kubalulekile ukuba uyazi le nto. Inkqubo ye- I-ICCR I-Scholarship 2021 ilawula uxanduva lwezezimali lwabafundi. Kwakhona, iphatha le mithwalo ngalo lonke ixesha lokufunda. Kananjalo, ukuba uyafaneleka, nceda uqaphele. Esi saziso uhlawuliswe ukuba ukhawuleze ufake isicelo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uyazi ukuba yintoni scholarship phambi kokuba siqhubele phambili.
A scholarship Ibhaso loncedo lwezezimali lokuqhubela phambili imfundo yabo. Ukufundiswa kwezifundo kunikezelwa ngokusekwe kwiindlela ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, ngesiqhelo, zibonisa amaxabiso kunye neenjongo zomnikeli.
Kwakhona, zibonisa ezo zomseki webhaso. scholarship imali ayifuneki ukuba ihlawulwe ngumfundi.
I-Council Council yaseIndiya yezoLuntu (ICCR)
Ngelixa ujonga i-ICCR Scholarship 2021, nceda uqaphele. Umxhasi wezifundo zokufunda liBhunga laseIndiya lobuDlelwane beNkcubeko (ICCR). ICCR ngumbutho ozimeleyo. Ngurhulumente waseIndiya.
Ikwabandakanyeka kubudlelwane bezenkcubeko zangaphandle zaseIndiya. Oku kwenzeka ngokutshintshiselana ngokwenkcubeko namanye amazwe kunye nabantu bawo. Yayisungulwa nge-9 ka-Epreli, ngo-1950. Kwakhona, yasekwa nguMaulana Abul Kalam Azad.
UMaulana Abul Kalam Azad wayengumphathiswa wokuqala wezeMfundo kwi-India ezimeleyo. Ikomkhulu le-ICCR likho eAzad Bhavan, kwi-IP Estate, eNew Delhi. Kwakhona, ineeofisi zengingqi kwi:
Bangalore, Chandigarh, Chennai, Cuttack kunye neGoa.
Ikwanayo naseGuwahati, eHyderabad naseJaipur.
Ngapha koko, ikho eKolkata, eLucknow naseMumbai.
Ukongeza, inePatna, iPune kunye neShillong.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, eThiruvananthapuram naseVaranasi.
Amaziko ase-ICCR enkcubeko
Ibhunga lisebenza kwimishini yamanye amazwe. Oku ngamaziko enkcubeko amiselweyo:
IGeorgetown, iParamaribo, iPort Louis, iJakarta, iMoscow neValladolid.
Kwakhona eBerlin, eCairo, eLondon naseTashkent.
Ngapha koko, kukho enye eAlmaty, eRhawutini naseThekwini.
Ukongeza, kukho ePort yeSpain naseColombo.
Nceda qaphela. I-ICCR ivule amaziko amatsha enkcubeko eDhaka, Thimpu naseSao Paulo. Kwaye banabanye eKathmandu, Bangkok, Kuala Lumpur, naseTokyo.
The ICCR yokufunda I-2021 yindawo ekubonelelwa ngayo yi-ICCR. Olu ncedo lolwabafundi baseIndiya nabaseBangladesh.
Eminye yemisebenzi yeBhunga laseIndiya lobuDlelwane beNkcubeko
Apha ngezantsi kukho imisebenzi ye-ICCR:
Bafumene bagcina ikopi yesimboli yamaHindu kaShiva Nataraja. Lo ngumnikelo kwiMyuziyam yoBugcisa baseAsia baseCorfu, eGrisi.
Kwakhona, iBhunga lijongana negunya lalo kuluhlu olubanzi lwemisebenzi. Esi sigunyaziso sisidiploma senkcubeko.
Ukongeza ekuququzeleleni imithendeleko yenkcubeko e-India nakwamanye amazwe, nceda uqaphele. I-ICCR ixhasa ngemali inani lamaziko enkcubeko kwiIndiya iphela.
Kwakhona, abaxhasi be-ICCR benza umntu ngamnye kumdaniso. Kumculo, ukufota, imidlalo yeqonga, kunye nobugcisa obubonwayo.
Ngapha koko, ilawula iJawaharlal Nehru Award yokuqonda kwamanye amazwe. Oku kwasekwa nguRhulumente wase-India kwi-1965.
Kwakhona, i-ICCR nguMxhasi we-ICCR Scholarship 2021.
ICCR Scholarship yaBafundi baseBangladesh 2021-22
Kubalulekile ukuba uyazi le nto. I-ICCR ibonelela ngezifundo ze1804 minyaka le. Oku egameni likaRhulumente wase-India. Kuku abafundi bamazwe ngamazwe. Ngokukodwa abo bakhetha ukufundisisa ubugcisa neenkcubeko ezahlukeneyo eIndiya. Abafundi abavela kumazwe angama-70 baxhamle kwesi sikimu.
Nceda uqaphele oku. Izifundo ze-ICCR 2021 zinikezelwa kubemi baseBangladeshi. Oku kubandakanya izifundo zesidanga sokuqala, izidanga zasemva kwesidanga kunye ne-PhD e-India. Nangona kunjalo, ngaphandle kweyeza. Ngaphezulu kwe-3000 ICCR Scholarship inikezelwe ukuza kuthi ga ngoku.
Kwakhona, izifundo ze-ICCR zinikezelwa kubantu baseBangladesh abafanelekileyo. Oku kuphela kwesidanga sokuqala, igraduate kunye neDigri. Urhulumente wase-India ukuza kuthi ga ngoku unike i-ICCR Scholarship malunga nabantu abangama-3000 baseBangladeshi. Kunyaka wokufunda ka-2021, nceda uqaphele. Ezi zifundo zilandelayo zinikezelwa:
Inkqubo ye-Bangladesh Scholarship Scheme. Oku kwenzelwa ubuNjineli. Ibandakanya iBachelor, i-postgraduate kunye ne-PhD.
Inkqubo yeBharat Scholarship Scheme. Ibandakanya iBachelor, i-postgraduate kunye ne-PhD.
Izidingo ze-ICCR Scholarship zaBafundi baseBangladesh
Apha ngezantsi kukho ezinye zeemfuno zale mfundo:
Ifoto yobungakanani bepasipoti yamva nje engekho ngaphezulu kwe-3.5 × 4.5cm (25kb). Kuya kulayishwa kwifom yesicelo kwisithuba esibonelelweyo. Kufanele ukuba inemvelaphi emhlophe kwaye ngaphandle kwemiboniso.
Kwakhona, layisha iikopi zazo zonke iziqinisekiso zemfundo. Iikopi zezatifikethi kunye neemakhishithi kufuneka zilayishwe. Oku kufuneka kubandakanye ezo zinxulumene noviwo lokuyeka isikolo.
Ngapha koko, isiqinisekiso sokomelela komzimba kwifom emiselweyo.
Kwaye, iingcebiso / izatifikethi zomlinganiswa ezivela kwisikolo esele sikhona / kwiYunivesithi.
Iikopi eziqinisekisiweyo zamaphepha afanelekileyo epasipoti esemthethweni yomviwa iyafuneka. Oku kubonisa ifoto, igama, iinkcukacha zonxibelelwano kunye nomhla wokukhutshwa. Ikwabonisa umhla wokuphelelwa kunye nendawo yokukhutshwa. Nceda uqinisekise ukuba incwadana yakho yokundwendwela isebenza ngokufanelekileyo ngalo lonke ixesha lesifundo osisebenzisileyo
Kwakhona, ngexesha lokulayisha amaxwebhu afunekayo, qaphela. Nceda uqinisekise ukuba onke amaxwebhu alayishwe ngokuchanekileyo kwimodyuli enikiweyo.
Izatifikethi zentsusa / amaxwebhu kufuneka ahanjiswe nguMfaki-sicelo ukuba wamkelwe. Oku kungqinisiswa yiyunivesithi / iZiko elichaphazelekayo ngexesha lokujoyina. Le yimfuneko esisinyanzelo. Ngaphandle koko ukwamkelwa kungarhoxiswa yiDyunivesithi / iZiko.
Kwikhosi zobunjineli, kufuneka ube neFizikiki, iKhemistry neMathematics (PCM). Oku kufanele ukuba kube kwiimviwo zakho zokuyeka isikolo. Kungenxa yokuba kunyanzelekile.
Abaviwa bayacelwa ukuba bangafaka isicelo kwi-portal kunye neenkcukacha ezinyanzelekileyo zeenkcukacha zabo zobuqu / zezifundo: Inombolo yePasipoti. Ubungqina bobudala. Iinkcukacha zesynopsis kwimeko ye-Ph.D. abaviwa
Ulungelelwaniso lwe ICCR Scholarship yaBafundi baseBangladesh
Ukulungela i-ICCR yokufunda i-2021, nceda uqaphele. Kuya kufuneka ukuba uvela eBangladesh.
Kwakhona, kuya kufuneka ube unesidanga se-BE / B Tech. Ngapha koko, kufuneka ufake isicelo sale khosi.
Iimfuno zoLwimi lweNgesi
Kwakhona, kuya kufuneka ube usazi kakuhle isiNgesi. Kuya kufuneka uthathe inxaxheba kuvavanyo lwesiNgesi lwemizuzu engama-30. Ixesha nendawo ziya kwaziswa. Kwaye kufuneka ubuncinci ube ne-60% yamanqaku kuvavanyo olwenziweyo. Okanye, ubuncinci i-3 kwi-GPA 5.
Kwakhona, kufuneka ubuncinci ube neminyaka eli-18 ubudala ngoJulayi 2021. Nceda uqaphele. Bonke abafundi kuya kufuneka bahlale kwiihostele. Akukho ngaphandle kwezizathu zosapho / zezempilo zokuhlala ngaphandle ziyonwabisa. Oku kusekwe kwimigaqo ye-ICCR nganye.
Ungasifaka kanjani isicelo se-ICCR Scholarship yaBafundi baseBangladesh
Ukufaka isicelo kwi-Intanethi kubafundi abanomdla, nceda uqaphele. Kuya kufuneka wenze i-ID yakho yokungena yangasese kunye negama lokugqitha. Uyacelwa ukuba ufake isicelo kwi-Intanethi ngokusebenzisa le miyalelo. Nceda ugcine la manqaku alandelayo ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo.
Abo bane-BE / B Tech. kufuneka ufake isicelo sale khosi. Kananjalo, isilabhasi yekholeji yesikolo kufuneka ibandakanye iFizikiki, iMathematics, kunye neChemistry.
Kwakhona, ubudala bakho kufuneka bube ngu-18 ngoJulayi 2021.
Ngapha koko, bonke abafundi mabahlale ehostele. Ayinakuba ngaphandle ngaphandle kosapho kunye nezizathu zempilo.
Umhla wokugqibela wokungeniswa kwesicelo esikwi-Intanethi nguJanuwari 20, 2021. Ixesha ngu-5.00 emva kwemini ngoMgqibelo. Kuya kufuneka uthathe inxaxheba kuvavanyo lwesiNgesi lwemizuzu engama-30.
Amaxwebhu axhasayo e-ICCR Scholarship
Apha ngezantsi kukho amaxwebhu wokuncamathisela ngexesha lesicelo:
Ikopi eqinisekisiweyo yazo zonke izatifikethi zemfundo kunye nokubhalwa ngesiNgesi.
Ikopi engqinelweyo yepaspoti ebonisa iphepha le-biometric.
Ngapha koko, ikopi eqinisekisiweyo yeSatifikethi sokuzalwa ngesiNgesi.
Isiphakamiso sophando seM Phil, Ph.D. okanye ubuDlelwane bePost-Doctoral.
Kwakhona, isiQinisekiso sezeMpilo. Kuya kuza neengxelo zovavanyo. Landela iFomathi efumanekayo kwisango lesicelo.
Ngapha koko, iileta ezimbini zengcebiso. Kwiileta zengcebiso kubalulekile ukukhankanya oku kulandelayo: Igama, igama, idilesi ye-imeyile, inombolo yefowuni kunye nedilesi yomntu okhuphayo.
Kwakhona, fota umbala. Oku kufanele ukuba kube nobuso bangaphambili ngaphandle kwemiboniso. Kufanele ukuba imvelaphi emhlophe
Ukufaka isicelo sale ICCR Scholarship 2021 Bangladesh, landela eli khonkco I SICELO LINKI
Ixesha yesicelo se-ICCR yokufunda i-2021
Awukho umhla wokugqibela. Njenge, ngeniswa Isicelo seseshoni 2021-2022 siyaqhubeka kubafundi baseBangladeshi.
1. Yintoni i-ICCR?
Sisifinyezo esimele iBhunga laseIndiya lobuDlelwane beNkcubeko.
2. Ngubani olungele iCCR Scholarship 2021?
Abafundi baseBangladesh bangafaka isicelo se-ICCR Scholarship 2021.
3, Ngubani uMxhasi we-ICCR Scholarship?
Oku kubonelelwa liBhunga laseIndiya lobuDlelwane beNkcubeko (ICCR).
4. Uthini uMhla wokugqibela we-ICCR Scholarship 2021?
Awukho umhla wokugqibela. Kananjalo, ukungeniswa kwesicelo seseshoni 2021-2022 kuyaqhubeka kubafundi baseBangladesh.
5. Ngaba umntu angabhalisa kwi-Intanethi?
Isishwankathelo, nceda uqaphele. Njengommi waseBangladesh unokufumana okuninzi kweli thuba. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqhubeke nophando malunga noku. Kwakhona, ukhululekile ukuba urhume / wabelane ngolu lwazi.
Ngapha koko, unokwabelana ngayo kumaqonga akho eendaba ezentlalo. Kwaye umbono wokwabelana kukuba kunokuba luncedo komnye umntu. Kananjalo, ukwabelana kwakho kunokuba kusenzela umntu into entle.
Isikhokelo seJp Morgan sokuSebenza kunye neemfuno eziBandakanyekayo
Faka isicelo ngoku kuQeqesho lwaBaphumeleleyo kwiiTekhnoloji zeHuawei Jonga uHlaziyo loDisemba
Imiceli mingeni yoPhuhliso lwaBasebenzi kunye nokuSetyenziswa kweMibutho yaseNigeria
Isisombululo se-ByteWorks Technology Solutions Limited kwiGosa leNkxaso yeProjekthi 2020
Faka isicelo ngoku kwiZithuba zoMlawuli weSikolo kwiQela eliDumileyo leZikolo eLagos
Uyithenga njani idatha kwiAirtel yokuKhangela ukuFuduka kunye neKhowudi yokuBhalisa
Different Types of Soft Skills Employers Look Out For 2020 Update
« I-Apple WWDC Scholarship 2021/2022 Jonga uPhuculo lweSicelo sePortal
Uluntu lwezoQoqosho lwaMazwe aseNtshona Afrika Ifomu yokufaka isicelo 2021 »